Semalt: Iingcebiso zoKhuselo lweBotnet. Indlela Yokuhlala Ukhuselekile?
I-rootkit yinkqutyana yesofthiwe efihliweyo kwaye ifakwe kwikhompyutheni okanye kwisistim eselula ngaphandle kolwazi lwakho. Kusenokwenzeka ukuba ikhusele inani elikhulu leenkqubo kunye neefayili ize ifake ngokuzenzekelayo ngabahlaseli. Basebenzisa amathuba okungabikho kwikhompyutheni yakho kwaye bakuncede ulande iinkqubo ezingaqhelekanga kunye nezixhobo - sweat stoffe gã¼nstig.
I-Artem Abgarian, ingcali ephezulu Semalt , iqinisekisa ukuba i-rootkits ayisoloko iyingozi kodwa ingafihla yonke imisebenzi enobungozi, ngoko kufuneka ubenqothule ngokukhawuleza. Ngamanye amaxesha abahlaseli bafikelela kwiinkcukacha zakho ezibuhlungu kwaye beba iinkcukacha zekhadi lesikweletu nge-rootkits. Zihlala zibeka iliso kwizenzo zomsebenzisi, zenze imisebenzi eyahlukahlukeneyo eyingozi kwaye ziguqule iinkqubo zakho ngaphandle kokufunyanwa ngumntu.
Ngakolunye uhlangothi, iibhenets zintanethi enkulu yeekhomputha zeekhompyutheni okanye ezinegciwane. Bahlakulela amanethiwekhi amaninzi kunye namancinci kwaye benza imisebenzi eyahlukeneyo. Kwiimeko zebhokisi, i-bots zihanjiswe kwiikhomputha kunye nezixhobo eziphathekayo ezingenakwenza imisebenzi yazo ngokufanelekileyo kwaye zilawulwa ngabahlaseli. Umhlaseli ufumana ukulawulwa kwefowuni yakho ngokusuleleka kwintsholongwane, ikhowudi enobungozi okanye i-malware ehlasela umshini wakho ngokukhawuleza. Ngokukhawuleza ikhompyutha iba yinxalenye yentanethi ye-botnet kwaye ayisebenzi ngokuqhelekileyo. Iibhotela zihlala zisetyenziselwa ukuqhuba uluhlu lwemisebenzi enobungozi, ukusasaza ii-virus kunye nogaxekile, nokuhlaselwa kwezixhobo ezintsha.
Kutheni ama-rootkits kunye neebhotshi eziyingozi ezinkulu
Ingxaki ephambili kunye ne-botnets kunye ne-rootkits kukuba bahlala befihliwe kwaye benza imisebenzi yabo ngokuthula. Nangona ama-botnets ahlale efihliwe, i-rootkits ayibonakali kwikhompyutheni yakho..Ngamanye amaxesha i-rootkits kunye ne-botnets zihlala zingabonakali kuze kube yilapho ngaphandle kokuba isixhobo sakho sonakaliswe ngokupheleleyo. Benza imisebenzi yabo buthule kwaye ngokuzenzekelayo bafake iinkqubo ezinobungozi kwisixhobo sakho. Njengoko banobunzima bokubona, abahlaseli bangasebenzisa kalula iibhentshi kunye ne-rootkits ukuguqula nokufikelela ulwazi lwakho lomntu. Bahlasela uluhlu oluninzi lweekhomputer kwaye benza ubundlobongela obuhlukileyo kwii bots, besele bafihliwe kwiikhompyutha kunye nezixhobo eziphathekayo. Ngamakhompyutha amancinci amancinci, abahlaseli banokunyusa ngokulula ulwaphulo lwazo lwaphulo-mthetho kunye nempembelelo kumabutho amancinci kunye namakhulu amakhulu.
Yintoni esinokuyenza ukuze sizikhusele?
Ukuba ufuna iindlela zokukhusela ezinokuthenjwa, unokulandela ezi nyathelo kwaye unciphise ubungozi bakho bekhompyutheni obuthelelekileyo okanye obuthathaka.
1. Gcina kwaye usebenzise iinkqubo ze-antivirus:
Iinkqubo ze-antivirus okanye isoftware kufuneka, kwaye kufuneka uzifake ngokukhawuleza. Banceda ukuqonda nokukhusela ikhompyutha yakho okanye isistim ephathekayo kwii-virus eziyaziwayo kunye ne-malware. Ungakwazi ukubona kalula i-malware kunye neentsholongwane kwaye unokubakhusela ukuba bangabangela iingxaki ezinkulu. Njengoko abahlaseli beqhubeka bebhala iikhowudi ezintsha zentsholongwane, kubalulekile ukugcina iinkcazelo kunye neenkqubo ze-antivirus zihlaziywa. Kufuneka ufake kwakhona iinkqubo zokulwa ne-rootkit kunye ne-anti-bot kwiziko lakho.
2. Faka ii-firewalls
Kumele ufake ii-firewalls ezinokukunceda ukukhusela iintlobo ezininzi zokusuleleka kwaye ukhuphe ityala elibi ngaphambi kokulimaza ikhompyutha yakho. Inciphisa imoto kwaye ikwazi ukwenza imisebenzi yayo kuzo zonke iinkqubo zokusebenza. Qinisekisa ukuba ugcina i-firewall yakho ihlaziywa rhoqo.
3. Sebenzisa iiphasiwedi ezinamandla
Kufuneka ukhethe amaphasiwedi aqinileyo ukuze abahlaseli bangakwazi ukuziqiqa ngexabiso. Sebenzisa amagama ahlukeneyo kwaye udibanise zombini iinombolo kunye nee-alphabet ngelixa udala iphasiwedi. Kufuneka uguqule rhoqo iphasiwedi ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho kwi-intanethi.